शब्दकोश: ‘होटलमा पढाइ’
तर यहाँनेर म त्यसरी यात्राका क्रममा मनमौजी रुपले कुनै क्याफे वा होटलमा बसेर आख्यान/गैरआख्यानबाट संसार चियाउने चर्चातर्फ केन्द्रित छुइनँ । कुरा हो औपचारिक शिक्षाको । कुरा हो अंग्रेजी माध्यममा पढाइने निजी स्कुलहरुको । जुन आजकाल पढ्ने ठाउँ कम र होटल बढी लाग्ने गर्छ । विद्यार्थीलाई दिवा खाना र खाजा खुवाउने त्यस्ता स्कुलहरुले स्कुल चलाएका हुन् कि होटल भन्नेमा नै अन्योल हुन्छ । दुनियाँ नै व्यावसायिक रफ्तारमा दगुरिरहेको बेला हामीकहाँ शिक्षा पनि व्यवसाय भइसक्यो । जहाँ ‘क्लालिटी एजुकेशन’ को उच्चारण गरिन्छ, अभिभावकको खल्तीबाट त्यहाँ पैसाको खोलो बग्यो भन्ने सोचे हुन्छ । अचेल पैसा कमाउन चाहनेहरु नगदे बालीको सल्लाह लिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धाउँदैनन्, स्कुल खोल्ने ग्रुप बनाउन चिया पसलमा जुट्छन् ।
बोर्डिङ स्कुलमा (बोर्डर्सको सुविधा नभए पनि अंग्रेजीमा पढाइने स्कुललाई यही नामले चिनिने भइसक्यो ।) पढाउने कुरा आजको समयमा अभिभावकहरुको लागि प्रतिष्ठाको विषय भइसक्यो । ती स्कुलहरुमा पनि अलिक नाम चलेको र महँगो स्कुल अधिकांशको रोजाइमा पर्छ । नाम चलेका स्कुल दामी हुन्छन् भन्ने सोचाइ होला । नाम चल्दा त्यही ख्यातिको मूल्य जोड्दै दामी त हुने नै भो, अर्थात् दाम बढी चढाउनुपर्ने स्कुल ! दाम नहुनेका सन्तान मात्रै केही उपाय नलागेर सरकारी स्कुल पढ्छन् भन्ने एकखाले सामाजिक मान्यता छ, जुन स्कुल झट्ट हेर्दा पनि भौतिक संरचनाका हिसाबले निकै गएगुज्रेका देखिन्छन् । राजेश हमाल र निखिल उप्रेतीका ‘एक्सन’ फिल्म हेर्न निम्न वर्गका दर्शक हलमा ओइरिए जस्तै ती स्कुलमा गरिब-गुरुबाका छोराछोरी सिंगान बगाउँदै र कम्मरबाट हरबखत चिप्लिरहने फ्रक/हाफपेन्ट तान्दै पसिरहेका हुन्छन् । सरकारले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा र बेलाबेला विशेष भर्ना अभियान चलाए पनि सरकारी स्कुलका विद्यार्थी आकर्षक ठाँटका देखिने निजी स्कुलहरुतिर ओइरिएका छन् । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणापछि अब पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने लहर चलिरहँदा कतिपय सरकारी स्कुलहरु विद्यार्थी नपाएर ‘मर्ज’ हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सुकिलोमुकिलो कसलाई मन पर्दैन र ? झट्ट हेर्दा चिटिक्क देखिने निजी स्कुलमा बालबच्चा पढाउने ध्याउन्नमा अभिभावकहरु आफूले तिर्नुपर्ने र तिर्दै आएको ढाड सेक्ने शुल्क चटक्कै भुल्छन् । राम्रो ठाउँमा पढाउँदा आफ्नो बच्चाको रहनसहन र व्यक्तित्वमा राम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अपराध होइन । अंग्रेजी भाषाको विश्वव्यापी दबदबा रहिरहँदा आफ्ना बच्चाले खरर अंग्रेजी बोलोस् भनेर अभिभावकले चिताउनु पनि पाप होइन । नेपाली माध्यमबाट सरकारी स्कुलमा पढेर आएका अभिभावकहरु झन् सन्तानले त्यसरी अंग्रेजी शब्द फुटाउँदा सन्तानमार्फत आफ्नो अपूर्णता / अक्षमता मेटिएको महसुस गरेर रमाउँदा हुन् । तर, हाम्रा टोलटोलमा खुलेका अंग्रेजी माध्यमका स्कुलहरुले त्यो मर्म र संवेदनाअनुसार अति व्यावसायिकतालाई छाडेर शिक्षा दिएका छन् त ? ‘विद्या धनम् सर्वप्रधानम्’ भनाइको अपव्याख्या गर्दै ती स्कुलहरुले कतै विद्या दिने कर्मलाई धन कमाउने माध्यम मात्र त बनाइरहेका छैनन् ? मन्टेश्वरीहरु खालि ‘मनीश्वेरी’ हरु त बनिरहेका छैनन् ?
मेरा दुई दिदीका गरी एक भाञ्जी र तीन जना भाञ्जा छन् । काठमाडौंको नाम चलेको निजी स्कुलहरुमा पढ्छन् । नर्सरीदेखि कक्षा ६ सम्म । शुल्क मासिक ६ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँसम्म । त्यसअन्तर्गत दुई हजारदेखि २५ सयसम्म खाना-खाजाको शुल्क । सरदर मासिक आठ हजार रुपैयाँ । रातो बंगला मार्काका अझ दामी स्कुलको जति शुल्क होइन यो । तर, मेरो हेराइमा बच्चाको उमेर र कक्षाको दाँजोमा महँगो शुल्क हो ।
अहिले मेरा छोराछोरी छन्‌ भनेर मान्ने हो भने मैले थाप्दै आएको मासिक तलबले उनीहरुलाई निजी स्कुलमा पढाउने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ । यसका लागि मैले कमाइको वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्छ, अथवा खाँदै आएको जागिरमा बढुवा र तलबवृद्धिको लागि चाकडी-गुलामीमा हातका रौं खुइल्याउनुपर्छ । लालनपालन र पठनपाठन गराउने हैसियत बनाउने नाममा मैले बच्चा जन्माउने समय नै सार्दै जानुपर्ने पनि हुन सक्छ ! लाग्न सक्ला - यो निकै विसंगत सोच हो, तर सत्य यही हो । मेरो अवस्था/दुरावस्था ! सबैको मेरो जस्तै गति/दुर्गति नहोला पनि । सबैले आफ्ना सन्तान पढाइरहेकै त छन् । तर, कसरी ? यो प्रश्नले ती बाबुआमाको कलेजीलाई कति चिरा पार्दो हो, तिनैलाई थाहा होला । मेरो समय आएपछि म पनि ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ उखानको मसिनो डोरीमा सर्कसको मान्छे हिंडे जस्तै जेनेतेन पढाउँला छोराछोरीलाई । पर्छ नै । मेरो धर्म त्यसबेला कुनै मठमा गएर ढुंगाको पाउमा माथा टेकाउनुभन्दा जेनतेन गुजारा चलाउनु नै हुनेछ ।
मेरी सानी दिदीले छोराछोरीको बिदाको दिन घरमै अलिक फरक स्वादको खाजा बनाएर खुवाउँछे । प्याकेटको र बजारको खानेकुरा सोझै किनेर खुवाउनुभन्दा बजारको जस्तै स्वाद खाऊन् भनेर पानीपुरी, आलुचप, चाउमिन, म:म: जस्ता कुनै परिकार बनाएर दिन्छे । त्यस्तो बेला भाञ्जी भन्छिन् – ‘स्कुलमा त खाजा मीठै हुन्न ! चाउमिन उसिनेको जस्तो मात्रै हुन्छ ।’
मीठो होस् पनि कसरी ? जन्तीको लर्को जस्तै दुई-अढाई सय विद्यार्थीलाई एकैचोटि पकाएको खाजा न राम्री भुटिन्छ, न त पाक्छ नै । भाञ्जा-भाञ्जी बिदाको दिन स्वाद मानेर ‘घरेलु खाजा’ खान्छन् । स्कुल चलेको दिन स्कुलमै खाना-खाजा ।
खाना-खाजाको ‘होटल’ चलाएका स्कुलहरुले केटाकेटीलाई घरबाटै खाना खुवाएर पठाउने भन्यो भने मान्दैनन् । टिफिनको समयमा घरबाटै खाजा ल्याइदिने वा विद्यार्थीको साथमै पठाइदिने भन्यो भने सहँदैनन् । भर्ना गर्ने बेलाकै अकाट्य नियम हुन्छ - खाना-खाजा शुल्कसहित मासिक शुल्क यति ! दुनियाँका छोराछोरीले त्यसैगरी स्कुलमै खाइरहँदा तपाईंलाई मात्रै आफैंले खाना-खाजा खुवाउने सुविधा ल मानौं स्कुलले दिएछ रे, तर त्यतिबेला तपाईं आफूलाई ती ‘दुनियाँ’सामु खाना-खाजाको पैसा बचाउन आफैंले खुवाएको भनेर चिनिन र लोभी देखिन चाहनु नै हुन्न । कतिपय परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ, तपाईं प्रतिष्ठा र इज्जतका लागि डुब्दो नाउमा प्वाल पर्दै जानुहुन्छ ।
जे होस्, तपाईंले सन्तोष मान्नुपरेको छ – ‘होटल’मै भए पनि मेरा छोरा-छोरी पढ्न त पढिरहेकै छन् नि !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, June 22, 2014